बीबीसीसँग कुरा गर्दै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुराले भने, ‘हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष १ करोड आप्रवासी भित्रिन्छन्’-Nepali online news portal
ग्युरिन ः अन्तर्वार्ताको लागि हामी बस्दै गर्दा संरा अमेरिकाले पठाएको सहायता कोलोम्बियामा थन्किएका छन् । यहाँ हामीले धेरै मानिस भेट्यौँ जसले आफ्नो लागि सहायताको अत्यन्त आवश्यकता रहेको बताए । किन सहायता रोक्नुभएको ?
माडुरो ः सबैभन्दा पहिलो कुरा त, संरा अमेरिकाले कोलोम्बिया सरकारसँग मिलेर भेनेजुयाली जनताको अपमान गर्न यो प्रपञ्च बुनिएको हो । भेनेजुयला आफ्ना जनताका सबै आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने क्षमता भएको देश हो ।
अरु देशहरूजस्तै भेनेजुयलाका पनि आफ्नै समस्या छन् । धेरै वर्षदेखि हामी एउटा लडाइँ लडिरहेका छौँ–गरिबी र दुःख कम गर्ने लडाइँ । यो लडाइँमा हामी क्रमशः सफल हुँदैछौँ । हामी रोजगारका अवसर बढाउन चाहन्छौँ, पेन्सन पकाएका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई हामी सामाजिक सुरक्षा दिन चाहन्छौँ । सबै भेनेजुयलाको पहुँचमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन चाहन्छौँ । हाम्रा ९० प्रतिशत छात्र छात्रा र सबै युवकलाई शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ ।
भेनेजुयला आफ्नै आत्मसम्मान भएको देश हो । सैनिक हस्तक्षेपलाई सही ठह¥याउन वा ‘मानवीय’ पुष्टि गर्न संरा अमेरिका भेनेजुयलामा मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । यसैको शिलशिला यतिबेला हामी देखिरहेका छौँ । त्यसकारण उनीहरूले केही विषाक्त खाना र केही बचेका खाद्यमार्फत देखाउन खोजेको सान्त्वनालाई हामी अस्वीकार गरिरहेका छौँ । भेनेजुयलाको आफ्नै आत्मसम्मान छ । भेनेजुयला आफै काम गर्न र उत्पादन गर्न सक्षम छ । भेनेजुयलाका जनता कसैसामु हात पसारेर बाँच्दैनन् ।
ग्युरिन ः तपार्इँले मानवीय सहायतालाई देखावटी भन्नुभयो । के वास्तवमा तपार्इँ भोकलाई पनि देखावटी नै देख्नुहुन्छ ? हामीले आफ्नै आँखाले भोक देख्यौँ । मैले पाँच बच्चाकी आमालाई भेटेको थिएँ । उनी भन्दै थिइन्, मेरा बच्चाहरू हरेक रात भोको पेट सुत्छन् । यहाँबाट केही परमात्र हामीले मानिसहरू खाना खोज्दै फोहोरको डङ्गुर चलाइरहेको देख्यौँ । के तपार्इँ इमानदारीका साथ भेनेजुयलामा भोक छैन भन्दै हुनुहुन्छ ?
माडुरो ः म तपाईँलाई भन्दैछु, लण्डनको बीबीसीले भ्रमको खेती गरिरहेको छ । अमेरिकी मिडियाहरू पनि त्यही गर्दैछन् । भेनेजुयलामा के भइरहेको छ भन्नेमा उनीहरू गलत प्रचार गरिरहेका छन् । भेनेजुयलामा चरम गरिबी र अभाव ४.४ प्रतिशत छ । निःसन्देह हामीले सुधार्न बाँकी विषय धेरै छन् । तर, कुल २५ प्रतिशत चरम गरिबीबाट हामी आजको स्थानमा आइपुगेका हौँ । हामीले असमानताका अरु पनि मानक घटाइसकेका छौँ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको हिसाबमा भेनेजुयला सबभन्दा उच्च सामाजिक समानता भएको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनले पनि स्वीकारेको विषय हो ।
हो, हामीकहाँ समस्याहरू छन् । तर, भेनेजुयला भोक भएको देश होइन ।
भेनेजुयलामा पौष्टिक तत्वको उच्चता भएको खानामा ज्यादै माथिल्लो पहुँच भएको देश हो । तर, पनि हामीमाथि त्यस्तो गलत र पूर्वाग्रह थोपर्नुको पछाडि एउटै कारण छः भेनेजुयलामा हुँदै नभएको मानवीय सङ्कटलाई अघि देखाएर हस्तक्षेपको बाटो बनाउनु ।
म संरा अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई भन्न चाहन्छुः तिमीले बैङ्क खाताहरूबाट १० अर्ब अमेरिकी डलर हडपेका छौ । उनीहरूले लण्डनमा सुनको रुपमा अरबौं अरब डलर चोरेका छन् । त्यो पैसाले हामी दैनिक आवश्यकताका वस्तु, कच्चा सामग्री, खान र औषधि किन्न सक्थ्यौँ । हामीले युरोक्लियरबाट खाद्यान्न, औषधि किन्दै गरेको १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर उनीहरूले महिनौंदेखि छिनेका छन् ।
कुरा सामान्य छ ः उनीहरूले भेनेजुयलालाई सहयोग गर्नै चाहेको हो भने हाम्रै स्वामित्वको स्रोतमा रहेका अरबौं डलरलाई खुला गरिदेओस् । तर, सस्तो लोकप्रियताको चालबाजी हामीलाई स्वीकार्य छैन । अपमान र हेपाहा प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । उनीहरू आज २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विषाक्त र कुहिएको खाद्यान्न सहायता गर्न खोजिरहेका छन् ।
ग्युरिन ः राष्ट्रपति माडुरो, मैले तपाईँको भनाइ बुझेँ । तपाईँ भेनेजुयलामा कुनै प्रकारको मानवीय सङ्कट नभएको भन्दै हुनुहुन्छ । यदि तपाईँको यो विश्वास नै सत्य भए भेनेजुयलाबाट किन ३० लाखभन्दा बढी मानिस देश छोडेर गए ? त्यति मानिस भनेको भेनेजुयलाको कुल जनसङ्ख्याको एक दसांश हो । संरा अमेरिकाले भेनेजुयलाबाट हरेक दिन ५ हजारको दरले मानिसहरू देश छोडेर गएको बताइरहेको छ । यदि कुनै सङ्कट नभएका किन ती मानिसहरू आफ्नो देश छोडेर गइरहेका छन् ?
माडुरो ः पश्चिमा मिडिया सबैमा एउटा समस्या छ । कुनै पनि प्रचारमा ल्याइएका झूटा कुरालाई तपार्इँहरू तथ्यको रुपमा बुझ्नुहुन्छ । भेनेजुयलालाई जोडेर प्रचारमा ल्याएको आप्रवासनको अभियान अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजी हुन् । भेनेजुयला त आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने देश हो । हामीले आप्रवासीलाई स्वागत गरेको कुरा त तपाईँहरू लेख्नुहुन्न, प्रसारण गर्नुहुन्न । कोलोम्बियामा भएको युद्धका कारण भेनेजुयलामा ५८ लाख कोलोम्बियालीहरू बस्दै आएका छन् । युद्धको समयमा कोलोम्बियामा भएको मानव अधिकार हनन र चुलिंदो अभावका कारण उनीहरू भेनेजुयलामा बस्न आएका हुन् । भेनेजुयलामा ३ लाखभन्दा बढी इटालियन, ३ लाखभन्दा बढी पोर्चुगिज, ३ लाखभन्दा बढी स्पेनी र लाखौं अरबी जनता बस्छन् । ३ लाखभन्दा बढी इक्वेडरका मानिसहरू र त्यही सङ्ख्या पेरुभियाली जनता बस्छन् ।
हरेक वर्ष भेनेजुयलामा १ करोडभन्दा बढी आप्रवासीहरू भित्रिने गर्छन् ।तर, यतिबेला आर्थिक युद्धका कारण बसाइराइले उल्टो गति लिएको मात्र हो ।
हाम्रो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार गएका दुई वर्षमा आर्थिक कारणले ८ लाखबाट बढेर एक जना पनि भेनेजुयाली देश छोडेर गएको छैनन् । उनीहरूले नयाँ विकल्पको खोजीमा देश छोडेका हुन् ।
यसरी देश छोडेर गएका अधिकांश भेनेजुयालीहरूले जहाँ पाइला राखेका छन्, त्यहाँ हण्डर खाएका छन् । किनभने अपेक्षा नै नगरेसरि उनीहरूले आफू गएको ठाउँमा जातिवाद, विदेभ, श्रम दासता भोगे । अहिले हजारौं भेनेजुयालीहरू स्वदेश फर्कंदैछन् । म तपार्इँलाई भन्नसक्छु– आर्थिक नाकाबन्दी, आर्थिक तगारा र आर्थिक कारबाहीहरूबीच भेनेजुयला सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा अवसर दिने देश हो । भेनेजुयला अझै पनि आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने देश हो । यही सत्य हो ।
गएको वर्ष सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा मात्र कति जना कोलोम्बियाली जनता भेनेजुयलामा आए थाहा छ ? १ लाख २० हजार कोलोम्बियाली जनता भेनेजुयला आए । उनीहरू थपिएपछि भेनेजुयलामा कोलोम्बियालीको सङ्ख्या ५८ लाख पुगेको हो । यो कसैले भन्न नचाहेको सत्य हो । पश्चिमा देशहरूमा भेनेजुयलाको अवस्थाबारे भ्रम प्रचार गर्ने खाका स्थापित बनाइएको छ । त्यो खाकाले कुनै पनि हस्तक्षेप र हमलालाई सही ठह¥याउन खोजिएको छ । अहिले भइरहेको यही हो ।
ग्युरिन ः तर, राष्ट्रपति माडुरो, तपाईँले हरेक दिन ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू कोलोम्बियाबाट देश छोडिरहेको भन्नुहुन्छ । तपाईँकै तथ्याङ्कलाई नै सही मान्दा पनि ८ लाख मानिस त देश छोडिसकेका रहेछन् । किन झण्डै दस लाख मानिस देश छोडेर जानुप¥यो ? अनि तपार्इँ अझै पनि देशमा मानवीय सङ्कट छैन भन्नुहुन्छ ?
माडुरो ः तपाईँले हामीले सामना गरिरहेको आर्थिक युद्ध र वित्तीय अप्ठ्यारालाई देख्नुपर्छ । संसारको कुनै पनि कुनामा भेनेजुयलाको नाममा रहेको बैङ्क खाता खोजी पत्ता लगाइएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पारेकै छ । केही भेनेजुयाली जनता सामाजिक सञ्जालका प्रचारबाजीका कारण विदेश गएर कुनै वैकल्पिक प्रकारको रोजगारीको खोजीमा लागेका छन् । शैक्षिक रुपमा उच्च योग्यता भएका भेनेजुयालीहरू नै विदेश गएका छन् । विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरू विदेशिएका छन् । निकै राम्रो क्षमता भएका मानिसहरू बाहिरिएका छन् । उच्च प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरू विदेशमा कुनै विकल्पको खोजी गर्न गएका हुन् । तर, उनीहरूले त्यहाँको अवस्था अझ भयावह भएको अनुभव गरेका छन् । आर्थिक कारणले विदेशिएका ती भेनेजुयाली जनतामध्ये अधिकांश घर फर्कनेमा तपार्इँ ढुक्क भए हुन्छ ।
अरु कुनै पनि दक्षिणी गोलाद्र्धका, तेस्रो विश्वका, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा जस्तै भेनेजुयलामा पनि समस्याहरू छन् । सामाजिक विकासका मानकमा हमीले धेरै प्रगति गरिसकेका छौँ । यो नै वास्तविकता हो । सिङ्गो महादेशमा सामाजिक प्रगतिको क्षेत्रमा सबभन्दा उँचो सफलता पाएको देश नै भेनेजुयला हो ।
अहिले हाम्रो देशमा समस्या भएको कुरा सत्य हो । तपार्इँ भन्नुस् त संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य हामीविरुद्ध खनिंदै छ, हाम्रा खातालाई निशाना बनाइरहेका छन्, विदेशमा रहेका हाम्रा सबै सम्पत्तिलाई रोक्का लगाइन्छ, भेनेजुयला जान हिँडेका कुनै पनि जहाजमाथि कडा निगरानी राखिन्छ भने निःसन्देह त्यसले यहाँको जीवनका उल्लेखनीय समस्या निम्त्याएको हुन्छ । हामीले यही सामना गरिरहेका छौँ । तर, हामी यो समस्यालाई समाधान गर्नेछौँ र यी चुनौतीमाथि विजय हासिल गर्नेछौँ ।
ग्युरिन ः तपाईँले यहाँ देखिएका कतिपय समस्या अरु देशमा देखिने भन्नुभयो । तर, राष्ट्रपति महोदय, गएको साल भेनेजुयलाको मुद्रास्फीति दर निकै उँचो थियो । १० लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखियो । संसारका कुनै पनि देशले यति अचाक्ली मुद्रास्फीति अनुभव गरेको थिएन । तपाईँ राष्ट्रपति पदमा आउँदा यहाँको मुद्रास्फीति दर २० प्रतिशत थियो । के यो आर्थिक दुरवस्थाको निम्ति तपार्इँ कुनै सम्बन्ध छैन भन्दै हुनुहुन्छ ?
माडुरो ः म फेरि पनि दोहो¥याउँछु, तपार्इँले पश्चिमा मिडियामा आएका कुरालाई नै आधार बनाइरहनुभएको छ । म तपार्इँलाई भेनेजुयलाको अवस्थाबारे गहिराइमा बुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु । निःसन्देह हामीकहाँ आर्थिक हमलाका समस्या छन् । तर, ग्युरिन तपार्इँ आफै भन्नुहोस्, दस लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा संसारको कुन देश टिक्नसक्छ ? तर, तपाईँहरू त्यसैलाई सत्य मानिदिनुहुन्छ । भेनेजुयलाको विरोधमा हुने बित्तिकै तपार्इँहरू कुनै अङ्कलाई समेत प्रश्न गर्नुहुन्न । भेनेजुयलाको विषयमा भनिएका कुनै पनि भूmटप्रति तपार्इँहरू आलोचनात्मक रुपमा हेर्नुहुन्न ।
हो, तपाईँहरू यस्तै हुनुहुन्छ । बीबीसी यस्तै छ । सीएनएन यस्तै छ । तपाईँहरू पश्चिमा मिडिया हुनुहुन्छ किनभने तपार्इँहरू हाम्रो देशमा हस्तक्षेपको खाका बोकेर आइरहनुभएको छ । पश्चिमको लागि भेनेजुयला किन यति चासोको विषय बन्ने गरेको छ ? संरा अमेरिकाको लागि भेनेजुयला किन यति चासोको विषय बनेको छ ?
सम्भवत ः हामी संसारको भूराजनीतिक नक्सामा अस्तित्वमा हटाइसकेका हुन्छौँ । तर, भेनेजुयलाले तेल उत्पादन गर्छ । भेनेजुयला संसारकै सबभन्दा धेरै तेलको खानी भएको देश हो । भेनेजुयलासँग संसारकै चौथो सबभन्दा ठूलो ग्यासको खानी छ । हामीसँग संसारकै सबभन्दा ठूलो सुनको खानी छ । यो पुष्टि भइसकेको विषय पनि हो । त्यसकारण भेनेजुयला महत्वपूर्ण बनेको छ । भेनेजुयला तेल उत्पादक देशहरूको सङ्गठन ओपेकको नेता देश हो । आजभोलि ओपेकको अध्यक्ष नै भेनेजुयला छ । त्यसकारण भेनेजुयलामाथि कुनै पनि प्रकारको आरोप लगाउन जरुरी मानिएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सैनिकलगायत सबैखाले हमला गर्न आवश्यक ठानिएको छ । इराक र लिवियाजस्तै बनाउन भेनेजुयलालाई चारैतिरबाट घेर्न खोजिएको छ । तर, भेनेजुयला भनेको इराक वा लिविया होइन । भेनेजुयलाको आफ्नै क्षमता छ । हामी यस्ता सबै मुद्दाको सामना गर्नेछौँ । तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, मिडियामार्फत भइरहेका सबै हमला, झूटमाथि हामी सत्यको अस्त्रमार्फत विजय हासिल गर्नेछौँ ।
ग्युरिन ः तपाईँलाई हामीले कुनै विचार पहिले नै बोकेर आएको जस्तो लागेको रहेछ । दुई साताअघि म पहिलो पटक भेनेजुयला आएको हुँ । यसक्रममा हामी स्वयम्ले यहाँको जीवन अवस्था नियालेर हेरेका छौँ । हामीले एक जना क्यान्सरको रोगी युवकलाई भेटेका छौँ । उनकी आमालाई बायोप्सीको पैसा लाग्ने बताइएको रहेछ । बायोप्सीको लागि तिर्न पुग्ने पैसा कमाउन उनको आमालाई कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेरहेछ । क्षयरोगीले थलिएका एकजना बिरामीलाई पनि हामीले भेटेका थियौँ । औषधि अभावका कारण उनको उपचार भइरहेको थिएन । ब्रेन ट्युमर भएका एक जना युवकलाई पनि भेटेका थियौँ । उनले शल्यक्रियाको एक वर्षदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको बताए । शल्यक्रियाको लागि आवश्यक सामग्रीको जोरजाम गर्ने उनकै जिम्मेवारी रहेछ । म स्वयम्ले यी मानिसहरूसँग भेटेर उनीहरूका अनुभव आफैले सुनेको हुँ । उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
माडुरो ः हामीले यही विषयमा लडाइँ लडिरहेका छौँ । युरोक्लियरमा हडपेको १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमध्ये आधा पैसा त मधुमेह र क्यान्सर रोगका औषधिको लागि थियो । त्यो पैसा त्यहीं रोक्का गरिएको छ । अनि हामीले पोर्चुगलबाट पनि प्रयास ग¥यौँ । त्यहाँ पनि २ अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरियो । तथापि हामीले औषधि किन्न सफल भयौँ । यो ज्यादै ठूलो प्रयासबाट सम्भव भएको थियो । हामीले जस्तो समस्या सामना ग¥यौँ, त्यस्तो समस्या त अरु कुनै पनि देशले सामना गरेन होला ।
ग्युरिन ः के तपाईँ राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गोरा अहङ्कारवादी भन्दै हुनुहुन्छ ?
माडुरो ः सबैको सामु खुलमखुला छ, उनी गोरा अहङ्कारवादी हुन् । संरा अमेरिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा उनी फासीवादी सोचलाई उकास्दै छन् । नवफासीवादी, नवनाजीवादी सोचको प्रवद्र्धन गर्दैछन् ।
संसारलाई घृणा गर्ने यो अतिवादी खेमा हो । उनीहरू ल्याटिन अमेरिकी, मध्य अमेरिकी, मेक्सिकाली, भेनेजुयालीलाई घृणा गर्छन् । उनीहरू हामीलाई घृणा गर्छन्, हामीलाई होच्याउँछन् । उनीहरू सिङ्को संसारलाई घृणा गर्छन् किनभने उनीहरू आफ्नै स्वार्थमा मात्र विश्वास गर्छन् । उनीहरू संरा अमेरिकाको हितलाई मात्र विश्वास गर्छन् । त्यसकारण भेनेजुयलाको लागि हामीले नेतृत्व गरिरहेको लडाइँ भनेको हाम्रो देशको सिमानाभन्दा परको पनि लडाइँ हो । यो लडाइँ प्रतिक्रियाको लडाइँ हो । हेर्नोस् त, केही दिनअघि मात्र डोनाल्ड ट्रम्पले हामीलाई सैनिक हमलाको धम्की दिइरहेका छन् । भेनेजुयलामा संरा अमेरिकी सेना पठाउने भन्दै थिए–ट्रम्प ।
किन ? एउटा शान्तिपूर्ण देश. भेनेजुयलामाथि युद्ध घोषणा गर्नुको कारण, अवस्था र मनसाय के हो ? म संसारका जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु–निद्राबाट व्युँझनुस् । आँखा उघार्नुस् । एउटा शान्त देशविरुद्ध कसरी हमला भइरहेको छ । संसारका धेरै देशमा जस्तै भेनेजुयलामा पनि समस्याहरू छन् । तर, शान्तिपूर्ण अवस्थामा मात्र ती समस्याका समाधान हुनसक्छन् । तपाईँ वास्तवमै भेनेजुयलामा सहयोगको हात बढाइरहनु भएको छ भने तपाईँले शान्तिलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।
संरा अमेरिकालाई भन्नुप¥यो–हस्तक्षेप बन्द गर । भेनेजुयलामा हात नहाल । संवाद र वार्तामार्फत आफ्ना समस्या समाधान गर्ने भेनेजुयलाको पहलकदमीलाई समर्थन गर ।
ग्युरिन ः तपाईँले अमेरिकीहरूलाई भेनेजुयलाबाट हात झिक्न भन्नुभयो । यो कुरा जायज छ । किनभने भेनेजुयला तपाईँको देश हो । तर, के तपाईँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट पनि आलोचना सामना गरिरहेको मान्नुहुन्छ ? यतिबेला वाशिङ्टनले मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकाका अन्य छिमेकी देशहरूले पनि तपाईँको आलोचना गरिरहेका छन् ।
माडुरो ः दुर्भाग्यवश केही देशमा यतिबेला अति दक्षिणपन्थी सरकारहरू शक्तिमा छन् । कोलोम्बिया र चिलीका सरकारहरू यसका दृश्ष्टान्त हुन् । चिलीका राष्ट्रपति पिनेरा पिनोचेको परम्पराबाट आएका हुन् । अर्जेन्टिनाको मार्की पनि उहीं परम्परामा आधारित हुन् । यतिबेला उनीहरूले अति दक्षिणपन्थी मोर्चा निर्माण गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले सम्मान र सहिष्णुताको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई विस्थापित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो असहिष्णुता थोपर्ने विचारधारा थोपर्न खोजिरहेका छन् । हामी यो दृष्टिकोणको कडा विरोध गरिरहेका छौँ । उनीहरूले एघार वटा देशको समूह बनाएका छन् । तीबाहेक ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियाली देशहरूसँग हाम्रो स्थायी सम्बन्ध छ । हालैसालै मोन्टेभिडियोमा हाम्रो एउटा बैठक भएको थियो । सबैले जान्नुपर्ने निकै महत्वपूर्ण बैठक भएको थियो त्यहाँ । कारिकम र क्यारिबियाली क्षेत्रबाट मेक्सिको, बोलिभिया, उरुग्वेलगायत चौध वटा सरकारले त्यहाँ भाग लिएका थिए । उनीहरूले भेनेजुयलालाई चार चरणमा सहयोग गर्न संवादको लागि संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो संयन्त्रमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबिया क्षेत्रका जम्मा १७ वटा देश सामेल हुनेछन् । आजभोलि उनीहरू वार्ता प्रक्रिया कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेका छन् । मैले त्यसलाई पूर्ण समर्थन गरेको छु । त्यो वार्तामा कुनै कुरा गोप्य रहनेछैन । खुला वार्ता हुनेछ । त्यस्तो शैलीको वार्ताले भेनेजुयलालाई शान्तिपूर्वक विषयवस्तु समाधान गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
ग्युरिन ः तर, युरोपले त तपाईँको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ नि । ह्वाइट हाउसमात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकामा तपाईँका छिमेकमा रहेका केही देशमात्र होइनन्, युरोपका शक्तिशाली देशहरूले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् ।
माडुरो ः डोनाल्ड ट्रम्पले लात मारेपछि युरोपका केही देश, केही सरकार डोनाल्ड ट्रम्पको पछाडि लाग्नु दुःखद कुरा हो । उनीहरू विनाकारण डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्णतः अवैधानिक नीतिको पछि लागेका छन् । युरोपेली सङ्घका राजदूतहरूसँग म बरोबर बैठक बसेको छु । मैले उनीहरूका संविधान पढेको छु । मैले उनीहरूलाई खेलको आपसी सम्मानको कानुनभन्दा बाहिर गएको भनी प्रस्ट बताएको छु । उनीहरूले भन्ने गरेका कुराहरू झूटा छन् । गलत निर्णय गरेका र निर्णय लिन पर्खिबसेका देशहरूसमेत सबै युरोपेली देशहरूबाट मैले वास्तवमै बढी आशा गरेको छु । उनीहरूले हामीलाई सुन्नेमा म आशावादी छु । मैले उनीहरूलाई भनी पनि सकेको छु–उनीहरू एकपक्षीय कुरामात्र सुनिरहेका छन् । युरोपेली सङ्घले जारी गरेका जति पनि वक्तव्य र भनाइहरू छन्, सबै भेनेजुयाली अति दक्षिणपन्थी शक्तिले भन्दै आएको कुराको पूर्णतः पुनःउत्पादनमात्र बनिरहेको छ । यस्तो हुनुहुन्नथ्यो ।
ग्युरिन, तपाईँ त वास्तवमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक एवं प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि बोकेको एउटा शक्ति हुनुहुन्छ । कमाण्डर चाभेजले थालनी गरेको यो बोलिभारियाली क्रान्ति अस्तित्ववान शक्ति हो । भेनेजुयलामा यो क्रान्ति शक्तिशाली छ र यो क्रान्ति सुनिन आवश्यक छ । मैले युरोपलाई भनेको छु–कान खोल्नुहोस्, सुन्नुहोस् । आपसी सम्मानको बाटो रोज्नुहोस् ।
ग्युरिन ः द बैङ्क अफ इङ्ल्याण्डमा तपाईँहरूको कति सुन रोक्का गरिएको छ ? भेनेजुयलाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बैङ्क अफ इङ्कल्याण्डमार्फत आफ्नो पहुँचमा ल्याउन खोजिरहनुभएको छ । कति सुन रोक्का गरिएको छ र तपार्इँहरूले त्यो निकाल्ने कुनै मौका पाउनुभयो कि पाउनुभएन ?
माडुरो ः बेलायतमा थपघट ८० टन सुन हुनुपर्छ । वैधानिक रुपमा त्यो सुन भेनेजुयलाको हो ।
त्यसको संरक्षण केन्द्रीय बैङ्कहरूले गरेको हुन्छ । त्यो सुन पनि भेनेजुयलाको केन्द्रीय बैङ्कको स्वामित्वको सुन हो । म आशा गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गरिनेछ । भेनेजुयलाको केन्द्रीय बैङ्कको सम्मान गरिनेछ । कानुन नै बलियो हुनेमा म आशावादी छु । वैधानिक रुपमा त्यो सुन हाम्रै भएकोले हामीबाट त्यो सुन लुटिएको छैन ।
ग्युरिन ः बेलायतको सरकार र प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
यथार्थमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो उति सम्बन्ध भएको छैन । यदि उनी हाम्रो कुरा सुन्छन् भने म उनीलाई भन्न चाहन्छु, “कान खोल्नुहोस् र भेनेजुयलामाथिको हमलालाई नियालेर हेर्नोस् ।” ल्याटिन अमेरिकामा युद्ध बन्न सक्ने हमलाको साझेदार नबन्नुहोस् । त्यो हमला अपराध हो । ह्वाइट हाउसमा बसेको अतिवादी समूहले भेनेजुयलाको नाममा जे पनि गर्न चाहिरहेको छ । म उनीलाई वास्तविकता नियालेर हेर्न आग्रह गर्छु । भेनेजुयलाको हृदयलाई हेर्नोस् । हामीविरुद्ध दैनिक रुपमा मच्चाइने अभियान र जानकारीभन्दा पर छ भेनेजुयलाको वास्तविक अवस्था । आशा गरौं, बेलायत र सम्रग युरोपसँग भेनेजुयालीबीच आपसी सम्मानमा आधारित संवादको प्रस्ताव आउनेछ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियाली क्षेत्रको शान्तिमा गम्भीर खतरा छ । आवश्यक पर्दा भेनेजुयला लड्न तयार छ । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति हामी लड्नेछौँ । हामी विगतमा पनि लडेका थियौँ । विगतमा पनि भेनेजुयलाको लडाइँको मैदानमा धेरै अङ्क्रेज र आइरिस जनता सामेल भएका थिए । म प्रधानमन्त्री मेमार्फत बेलायती जनता र सिङ्को संयुक्त अधिराज्यको जनतासमक्ष हामीप्रति ऐक्यबद्धताको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ । शान्तिको पक्षमा उभिन आह्वान गर्छौँ । जोन लेननको गीत ‘गीभ पिस अ चान्स’ लाई सम्झौँ । शान्तिलाई मौका देऔं र भेनेजुयलामा सत्यलाई मौका देऔं । यही मेरो आह्वान हो ।
ग्युरिन ः तपाईँले लड्नको लागि तयार भएको बताउनुभयो । यदि संरा अमेरिकाले भेनेजुयलाको सिमाना नाघेर आए के तपाईँ सशस्त्र प्रतिरोध गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
माडुरो ः त्यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले हामीलाई अर्को कुनै विकल्प छोडेको हुनेछैन । हाम्रो देशको अस्तित्वको अधिकारको लागि हामीले प्रतिकार गर्नैैपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार हामीले जोगाउनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुनेछैन भन्नेमा म आशा गर्छु । जनताको मत शान्तिको पक्षमा हुनेमा म आशा गर्छु । भेनेजुयाली जनता कति भद्र छन् भन्ने कुरा उनीहरूले देखून् । हाम्रा समस्याबारे शान्तिपूर्वक कुराकानी गर्ने अधिकार हामीलाई छ । कसैले पनि भेनेजुयलामा हस्तक्षेप नगरोस् । संसारभरका शक्तिशाली जनमतसामु ह्वाइट हाउसको त्यो अतिवादी समूह पराजित भइसकेको छ । म यसमा विश्वास गर्छु । म आस्थिक हुँ । म क्रिस्चियन हुँ र म सधैं ईश्वरसामु हामीलाई सद्बुद्धि दिन र रक्षा गर्न प्रार्थना गर्छु । हामीले सबै कुरा शान्तिपूर्वक नै हासिल गर्नेमा म आस्था राख्छु ।
ग्युरिन ः विपक्षहरू स्वयंसेवकहरूको कुरा गरिरहेका छन् । भेनेजुयलाभित्र सहायता सामग्री भित्र्याउन मानिस परिचालन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यदि उनीहरूले त्यस्तो प्रयास गरे के तपाईँहरूले उनीहरूमाथि गोली वर्साउनुहुन्छ ?
माडुरो ः हामीले त्यस्तो कहिल्यै गरेनौँ । हामी त्यस्तो कहिल्यै गर्दैनौँ । विपक्षीको आफ्नै रणनीति र राजनीति छ । उनीहरू आफ्नै प्रकारले काम गर्नसक्छन् । यो देशमा उनीहरूले जे चाहन्छन्, त्यसै गर्न स्वतन्त्रता राख्छन् । तर, त्यस्तो खालको दमन न कहिल्यै भएको थियो न हुने नै छ ।
ग्युरिन ः तर, सरकारविरोधी प्रदर्शनको क्रममा त मानिस मारिएका छन् नि । गएको महिनामात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चालीस जना मानिस मारिएको बताएको थियो । तीमध्ये झण्डै २६ जना सुरक्षाकर्मीले मारेको बताएको थियो । मानिसहरूले अझै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
माडुरो ः कुन प्रदर्शन ? उनीहरू बढीमा पन्ध्र दिन टिक्ने कुनै पनि आन्दोलन गरेको कुनै पनि प्रमाण देखाउन सक्दैनन् । मैले हेरेको छु । म अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यम हेर्ने गर्छु । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले त्यस्तो भेनेजुयला देखाइरहेका छन् जो यहाँको सडकमा हुने गरेको हुँदैन । गएको जनवरी २३ मा ठूला जुलुस भएका थिए । विपक्षीहरूले पनि ठूलो जुलुस निकाले, हामीले पनि निकाल्यौं । ती तस्वीर र सडकमा तनावका अन्य तस्वीर देखाएर उनीहरू बितेका पन्ध्र दिनदेखि भेनेजुयलामा ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेको फलाकिरहेका छन् । जनवरीको २५, २८, २९ र फेब्रुअरी १ मा मलाई फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने संसारका विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले मलाई सोध्दै थिए–के भेनेजुयलाका सडकमा ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् ? मैले भनेँ, “अहँ छैन । भेनेजुयला आफ्नै काममा मस्त छ । भेनेजुयलामा शान्ति छ ।
सत्ताविप्लवको प्रयत्नलाई जायज प्रमाणित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन भेनेजुयलाका प्रमुख सहर ठप्प गर्ने उनीहरूको योजना थियो । तर, उनीहरू आफ्नो योजनामा असफल भए । केही स–साना अराजक समूह नै सडकमा देखिएका हुन् । उनीहरूलाई त्यसो गर्न विपक्षीहरूले पैसा दिएका छन् । उनीहरू आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिको चेपुवामा फसेका छन् ।
ग्युरिन ः धेरै ठूलठूला विरोध प्रदर्शन भएका थिए । तीमध्ये केही प्रदर्शन त हामी स्वयंले पनि देखेका छौं । हामीले तपाईँका समर्थकहरू पनि देखेका थियौं । विपक्षीहरूले धेरै सङ्ख्यामा मानिस सडकमा उतारेको र उनीहरू परिवर्तनको आह्वान गर्दै सडकमा प्रदर्शनमा उत्रेकोमा के तपाईँ विमति राख्नुहुन्छ ?
माडुरो ः हो, मैले पनि देखेको छु । विरोध गर्ने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित राखिएको छ । हामीले जस्तै विपक्षीहरूले पनि ठूला प्रदर्शन गरेका छन् । भेनेजुयलाको प्रजातन्त्र गतिशील प्रजातन्त्र हो । क्रान्तिको समर्थन गर्ने मानिस पनि छन्, क्रान्तिको विरोध गर्ने जनता पनि छन् । उनीहरू जतिबेला पनि प्रदर्शन गर्न पाउँछन्, उनीहरूको त्यो अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । मैले सधैं भन्ने गर्छु, उनीहरूले गर्ने सबै त्यस्ता प्रदर्शन शान्तिपूर्वक होस् । उनीहरूभित्र सानो आकारको हिंसात्मक टोलीहरू छन् । विपक्षीहरूका विरोध प्रदर्शन जब सकिन्छ तब जहिल्यै उनीहरू शान्ति सुव्यवस्थामा दखल पु¥याउन प्रहरीसँग भिड्न निहुँ खोज्ने गर्छन् । विपक्षीले जति पटक मनपर्छ, त्यत्ति पटक प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आफ्ना नारा र माग राख्न सक्छन् । हामीले पनि जनपरिचालन गर्छौं । सुखद् पक्ष भनेको हामी जनतासँग गतिशील प्रजातन्त्र छ ।
ग्युरिनः तपाईँले सत्ता छोड्ने कुनै प्रकारको अवस्था छ ?
माडुरो ः हेर्नोस् ग्युरिन, व्यक्तिको रुपमा शक्तिमा बसिरहनु मेरो चाहना होइन । शक्ति छोड्नु पनि मेरो व्यक्तिगत चाहनामा भरपर्ने विषय होइन । म सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलनको हिस्सा हुँ । त्यही जनताको आन्दोलनले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको हो । संविधानद्वारा निदृष्ट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर, चुनावी आवश्यकता पूरा गरेर मलाई दिएको यो म्यान्डेट निकै शक्तिशाली छ । त्यो म्यान्डेट मैले जीवन दिएर पुरा गर्नुछ । मैले त्यसैको लागि सपथ खाएको छु । मैले सर्वोच्च अदालतसामु संविधान जोगाउन र बलियो बनाउन आफ्नो ज्यान दिने सपथ खाएको छु । यो म्यान्डेट हो । जनताले दिएको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव सबै काम म गर्नेछु ।